AppImage dia manana fivarotana fampiharana "AppImageHub" | Avy amin'ny Linux
Amin'ny Linux mazàna isika dia tena zatra mametraka na mahazo ireo programa misy antsika na fonosana amin'ny alàlan'ny rafitra fonosana izay fomba fizarana, hoy Deb, RPM na ny kaody loharano.
Izany dia natao toy izao nandritra ny taona maro, fara fahakeliny, saingy taona vitsivitsy lasa izay dia nanomboka nipoitra ireo rindranasa "universal" ho an'ny Linux (mba hiantsoana azy ireo) satria ireo dia azo apetraka na mihazakazaka amin'ny fizarana Linux maro.
1 Fampiharana manerantany amin'ny Linux
2 Momba ny AppImageHub
2.1 Fa maninona no AppImage?
Fampiharana manerantany amin'ny Linux
Talohan'ity Manondro ny trio Flatpak, Snap ary Appimage malaza izahay, na dia misy koa ny OrbitalApps (saingy toa tsy mandeha intsony ilay hevitra na hadino).
Flatpak, fantatra amin'ny anarana hoe xdg-app hatramin'ny Mey 2016, dia fitaovana ampiasaina amin'ny fametrahana rindrambaiko, fitantanana fonosana ary virtualization ho an'ny tontolon'ny birao Linux.
Ny utility dia manome tontolo boaty fasika antsoina hoe Bubblewrap, izay ahafahan'ireo mpampiasa mihazakazaka ny fampiharana mitokana amin'ny sisa amin'ny rafitra
Ny fonosana rindrambaiko "snap" irery izy ireo ary miasa amin'ny fizarana Linux be dia be.
Mamela ny fametrahana lozisialy miakatra izy ireo. Ny rafitra dia natao hiasa amin'ny Internet amin'ny zavatra, ny rahona ary ny informatika.
AppImage dia endrika iray hizarana rindrambaiko azo entina amin'ny Linux tsy mila alalana superuser hametraka ny rindranasa.
Ity endrika ity dia natao hamelana ny fizarana lozisialy binary tsy miankina amin'ny fizarana Linux ho an'ireo mpamorona fampiharana, antsoina koa hoe fonosana Upstream.
Ahoana no hahalalan'izy ireo Flatpak sy Snap dia manana tranonkalany manokana, izay ankoatry ny fanolorana ireo fomba fametrahana ireo amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux, manana "app store" FlatHub sy snapcraf.io ihany koa izy ireo.
Raha ny momba ny Appimage dia tsy toa izany ilay zavatra, satria amin'ny tranokalan'izy ireo dia tsy manondro afa-tsy ireo torolàlana momba ny fampiasana, fa afaka mahita ny AppImageHub izay ampiantranoina ao amin'ny GitHub izahay ary manana fanangonana fampiharana feno amin'ity endriny ity izy.
Momba ny AppImageHub
AppImageHub dia manana fiasa mahaliana toy ny: Fahazoana miditra amin'ny tranokala ofisialin'ny fampiharana, Bugtracker (mitatitra bug momba ny rindrambaiko), FAQ an'ny fampiharana, izay amahana fanontaniana matetika dia voavaha sy ampifandraisina amin'ny fandraisana anjara amin'ilay tetikasa, amin'ny alàlan'ny fanampiana ara-bola.
Tsy ny programa rehetra no manana an'io fiasa io. Toa zavatra mifandraika amin'ny hoe iza no mizara azy ireo, raha misy ny fahafaha-manao toy izany dia mifandray amin'ny pejy App ao amin'ny AppImageHub izy ireo.
Amin'ny fisafidianana ny sokajy irina, sary an-tsary, famintinana fohy ary rehefa misy dia aseho, ireo safidy voalaza etsy ambony. Fitaovana fototra toy ny: Misintona ny rindrambaiko, iza no mizara izany ary ny tranokala Github dia eo ihany koa.
Hatramin'izao, ny appimage.github.io dia manana rindranasa AppImage maherin'ny 600 tafangona ao amin'ny "fivarotana" misy azy, izay manana lafiny fahitana tsara ihany koa, nozarainy tamin'ny sokajy, izay ahitantsika ireto manaraka ireto:
Sary sy sary
Fifandraisana sy vaovao
Fa maninona no AppImage?
AppImage dia tsy dia malaza toa an'i Snap sy Flathub, satria indrindra Tsy dia mora loatra ny mahita rindranasa amin'ity endrika ity satria ny 2 teo aloha dia manana ny fivarotany ary manamora ny zavatra izany.
Eto no misy AppImageHub dia manana tany betsaka hahazoana sy hitrandrahanaAnkoatr'izay, anton-javatra iray hafa dia ny tsy fisian'ny mpampiasa be loatra amin'ny fampiasana ny AppImage.
Na izy ireo aza teboka lehibe manohana fa ny fampiharana dia avy amin'ny fisie, izay azontsika atao amin'ny tsato-kazo USB na media fitehirizana tianao ary mampandeha ny fampiharana antsika amin'ny solosaina hafa raha tsy miverina amin'ny "fametrahana indray".
Etsy ankilany, manamora ny fitsapana ny rindranasa ihany koa ny mpampiasa raha tsy manimba ny rafitr'izy ireo ary mameno azy io amin'ny fiankinan-doha sy fonosana fanampiny.
Tsy isalasalana fa ny AppImage dia manana toerana marobe ary indrindra amin'ny mpiorina izay manome azy ireo ihany koa ny toerana hizarana ny fangatahany amin'ity endrika ity
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » AppImage dia manana fivarotana fampiharana "AppImageHub"
Ubuntu Touch OTA-7 dia misy amin'ny fanatsarana maro izao